Xeerka - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn/Médecins Sans Frontières (MSF) waa urur gaar ah oo caalami ah. Ururku waxa uu badiba ka kooban yahay dhakhaatiir iyo shaqaalaha caafimaadka waxaana u furan in ay xubno ka noqdaan dhammaan xirfadlayaasha kale ee gacan ka geysan kara gaaritaanka ujeeddooyinkiisa. Dhammaan xubnihiisu waxa ay heshiis ku yihiin in ay ixtiraamaan mabaa’diidaaan:
Ururka dhakhaatiirta aan xudduudda lahayn ee MSF wuxuu kaalmo u fidiyaa dadaa dhibaato xuni ku habsato, dadyowga ay la soo gudboonaadaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa beni`aadamku abuurayba; iyo dadka ku waxyeelooba dagaallada, iyadoo aan la kala soocin, loona eegayn, qolo, diin, mad- hab, iyo siyaasad ahaan halka uu raacsan yahay.
MSF waxay ilaalinaysaa mabaadii`da dhexdhexaadnimada iyo in aysan dhinac noqon, iyadoo raacaysa xeerka caalamiga ah ee dawaynta, iyo xaqa gargaarka beni`aadminimo; waxayna dalbanaysaa in aan la is-hortaagin iyo in ay si xorriyad buuxda ah hawlaheeda u fuliso.
Mutadawiciinta MSF waxay balanqaadayaa in ay xurmaynayaan ayna dhawrayaan xeerkooda iyo mabaadiid`dooda xirfadeed, isla markaasna ay ilaashanayaan madaxbanaanidooda taamka ah ee ay ka madaxbannaan yihiin dhammaan xooggaga siyaasadda, kuwa dhaqaalaha iyo kuwa diimaha. Mutadawiciin ahaan, mutadawiinta MSF waxay si buuxda u ogyihiin halista iyo khatarta hawlaha ay qabanayaan; mana lahan wax xaquuq magdhaw ah iyaga iyo dadka ay u adeegaan toona oo aan ka ahayn waxa MSF ay u awooddo.